अभिजात वर्गको कक्षा - सीजन २ प्रीमियर मिति + अन्त्य वर्णन गरीएको - पालना दृश्य
अभिजात वर्गको कक्षा
by Dima 4th जनवरी 2022 12th जनवरी 2022
4 टिप्पणिहरु एलिटको कक्षाकोठामा - सीजन २ प्रिमियर मिति + अन्त्यको वर्णन गरिएको छ
यो एनिमे क्लासरूम अफ द एलिट अस्पष्ट रूपमा समाप्त भयो, धेरै प्रशंसकहरूले कसरी स्पष्टीकरणको आशा राखेका थिए। कियोटाका पूरै कक्षालाई बचाइयो, कता कता धेरै चर्चा भयो एनिमे जानेछु। यसैले हामी एलिट सिजन2को कक्षा कोठामा छलफल गर्नेछौं, यदि यो सम्भव छ भने, यो रिलीज हुने समय र थप।
को अवधारणा अभिजात वर्गको कक्षा धेरै रोचक छ।4विभिन्न वर्गहरू सबैलाई सबैभन्दा खराबमा उत्कृष्टमा विभाजन गरिएको छ, A सबैभन्दा राम्रो वर्ग र D सबैभन्दा खराब भएको छ। कथाले मुख्य पात्र कियोटाकालाई पछ्याउँछ, जो अन्तिम चरणमा छ एनिमे पहिलो चुनौती सफलतापूर्वक पूरा गर्न र शीर्षमा आउन आफ्नो सम्पूर्ण कक्षा बचत गर्छ।
Elite को कक्षा कोठाबाट Kiyotaka
नहेरेका जो कोहीको लागि हामी तपाईंलाई दिन सुझाव दिन्छौं अभिजात वर्गको कक्षा एक शट, यो हेर्न लायक फरक छ। जहिले पनि त्यहाँ कथानक र क्यारेक्टरहरू आदिको सन्दर्भमा प्रमुख बिगार्नकर्ताहरू छन्, त्यसैले यदि तपाईंले यसलाई समाप्त गर्नुभएको छैन भने हामी तपाईंलाई यस लेखमा अगाडि पढ्नु अघि यसलाई समाप्त गर्न सुझाव दिन्छौं।
कुलीन वर्गको कक्षाको मुख्य कथा
एलिट सीजन २ को कक्षा
कथाले लेखेका उपन्यासहरूमा आधारित छ शोगो किनुगासा र सचित्र द्वारा शुन्साकु टोमोसे र कक्षा D मा विद्यार्थीहरूलाई पछ्याउँछ जब तिनीहरूले यो नयाँ फेला परेका विद्यालयमा आफ्नो यात्रा सुरु गर्छन्। यद्यपि, यो शृङ्खलामा पहिले नै खुलासा गरिएको छ कि यो कुनै सामान्य प्रकारको विद्यालय होइन। उनीहरू पढेको विद्यालयमा आधारित र सञ्चालित छ पदानुक्रम संरचना जसलाई विद्यार्थीहरू सबैले समायोजन र असफल बिना पालन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई तिनीहरूको कार्यहरूको आधारमा बिन्दुहरू प्रदान गरिन्छ, र तिनीहरूले आफूले चाहेको कुनै पनि कुरा खरिद गर्न यी अंकहरू प्रयोग गर्न सक्छन्।
के विद्यार्थीहरूले कार्यहरू र बोनस अंकहरू, साथै S अंकहरूको लागि योग्यता अंकहरू प्राप्त गर्छन्? म निश्चित छैन कि फरकहरूको अर्थ के हो तर पहिलेका एपिसोडहरूमा, सबैलाई सुरुमा धेरै अंकहरू प्रदान गरिन्छ। यदि तपाइँ श्रृंखलामा बिन्दु प्रणालीको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ।
स्कूलमा students वटा विद्यार्थीहरू छन्, A, B, C, D. A शीर्ष वर्ग भएको (जहाँ सबैजना प्राप्त गर्न कोशिस गर्दैछन्) र कक्षा D, तल। हाम्रो मुख्य चरित्र हो कियोटका अयानोकजी कक्षा D मा छ, र हामी उस्को बोरिंग भ्वाईस-ओभरको साथ श्रृंखलाको सबै घटनाहरूको बारेमा अधिक विषयहरूमा उनको विचारको साथ अधिकांश एपिसोडहरू देख्छौं। हामीसँग पनि परिचय छ सुजुन होरकिता जो कक्षा A मा हुन चाहान्छ र यसको बारेमा धेरै जोशिलो छ। उनले कक्षा in मा आफ्नो स्थानको बावजुद अरु सबै कक्षालाई पछाडि पार गर्न चाहेको तथ्यलाई लुकाउँदैनन्, र अन्य सदस्यहरूलाई (जो राख्न सक्दैनन्) पछाडि छोड्ने विचार राख्दिन। उनीसँग सामान्यतया मनपर्दैन चरित्र छ तर उनको बारेमा धेरै खराब पनि छैन, हामी उनलाई पछि भेट्नेछौं।
यहाँ हामीले हाम्रो मुख्य पात्रसँग परिचय गराएका छौं, जसलाई हामी पछि जाँदैछौं। दोस्रो एपिसोडमा, सबैले आफ्नो बिन्दुहरू मार्फत जलाए जुन यस बिन्दुमा अनिवार्य रूपमा डिजिटल मुद्रा हो। कक्षा डी नपाएका मात्र २ जना विद्यार्थी सुजुने र कियोटाका हुन्। तिनीहरूले आफ्ना अंकहरू बचत गर्छन् र तिनीहरू दुवै कक्षामा मात्र चतुर व्यक्तिहरू देखिन्छन्। Suzune पनि धेरै असामाजिक छ र पहिलो दुई दिनमा अन्य कुनै पनि विद्यार्थीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दैन।
उनीसँग कुरा गर्ने एक मात्र व्यक्ति कियोटाका हो। उनको बोरिंग व्यक्तित्वको बावजुद उनी चासो र रहस्यमय देखिन्छन्, तथापि, अन्य विद्यार्थीहरू र कियोटाकासँगको उनीहरूको अन्तरक्रिया, विशेष गरी, श्रृङ्खलाभरि थप स्थिर हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई श्रृंखला भर विभिन्न चुनौतीहरू दिइन्छ।
हामीलाई अन्तिम एपिसोड सम्म किओटाकाको वास्तविक अभिप्रायहरू वास्तवमै थाहा छैन र हामी उनलाई वास्तवमै पत्ता लगाउँदैनौं। ऊ कुनै चीज वा कसैको लागि निश्चित चासोको कमी देखाउँदछ तर उसले देखाउँदछ कि ऊ कक्षा १० मा हुँदा उसले गर्ने कार्यहरुमा सक्षम छ भनेर उसले देखाउँदछ। उसले धेरै कक्षा सफलताहरूको योजना बनाएको छ जबकि उसले अझै आफैंलाई बोरिंग भैरहेको विचार राख्छ र नगण्य। मलाई लाग्दैन कि श्रृंखला हेर्ने धेरै व्यक्तिले यो महसुस गरे कि किओटाकले सम्पूर्ण शृंखला र धेरै मनोवैज्ञानिक लक्षणहरू प्रदर्शन गर्दछ र ऊ सामान्यतया मेरो लागि डरलाग्दो जस्तो देखिन्छ।
पहिलो, हामीसँग छ कियोटका अयानोकजीजो Advanced Nurturing School मा विद्यार्थी हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै बोरिंग हुनुहुन्छ र सामान्य रूपमा। एक निश्चित POV बाट उनीसँग वास्तवमा कुनै पनि रोचक चरित्र लक्षणहरू छैनन्। यो केवल सिजन 1 को अन्तिम एपिसोडमा ठीकसँग प्रकट भएको छ कि उसले आफ्नो सहपाठीहरूलाई व्यवहार गर्ने र आदर गर्ने तरिकामा सामाजिक र साइकोपैथिक लक्षणहरू प्रदर्शन गर्दछ। यसले स्पष्ट रूपमा उसलाई थप चाखलाग्दो बनाउँछ र अन्तिम एपिसोडमा उनले के भनेका थिए भन्ने सुन्दा यसले मलाई गार्ड बन्द गर्यो। यदि त्यहाँ ए अभिजात वर्गको कक्षा सिजन २ यसको वरिपरि आउँछ कियोटाका पक्कै पनि यसमा हुनेछ।
शृ .्खलाको दौडान, उसको अतीतको निरन्तर फ्ल्याशब्याकहरू थिए, जस्तो देखिन्छ कि ऊ कुनै कठोर उपचारको अधीनमा भएको हुन सक्छ। उनले जोड दिए कि उनी, होरीकिता जस्तो कक्षा ए सम्म पुग्न चाहन्छ। यो देखाइन्छ कि ऊ केवल व्यक्तिलाई शीर्षमा पुग्न प्रयोग गर्न चाहन्छ। यद्यपि म उहाँलाई वास्तवमै मन पराउँदिन, तर मँ त्यसका लागि जरा गाँसेको छु।
अर्को हो सुजुन होरकिता सुरुमा मैले कसलाई असह्य ठानें। उनीसँग अचाक्ली प्रकृति छ र अरूलाई तल हेरे जस्तो देखिन्छ। उनीसँग धेरै साथीहरू छैन जस्तो देखिन्छ र धेरै अप्ठ्यारो छ। उनी पनि धेरै असामाजिक छिन् र उनी अरूसँग कुरा गर्ने तरीकामा प्रायजसो द्वेषपूर्ण छिन्। उनी वास्तवमै किन यस्तो देखिन् भनेर यो कहिले पनि थाहा हुँदैन। हुनसक्छ यो उनको जेठो दाइको कारणले हो, म साच्चिकै निश्चित छैन, तर उनको चरित्र वास्तवमै त्यति गएको छैन। होरिकिता पक्कै पनि मा देखा पर्नेछ अभिजात वर्गको कक्षा.
उनी एक पाखण्डी पनि हुन् र प्रायः आफैं संलग्न हुने कारणहरूको लागि कियोटाकाको मजाक गर्छिन्। उनी आफैं बसेकोमा उसको मजाक गर्छिन्, तर पनि उही कुरा गर्छिन्? यसले मलाई उनको चरित्र धेरै मन नपराएको थियो। यो विडम्बनापूर्ण छ कि उनी कत्ति चतुर छिन् भनेर सोच्छिन्, यद्यपि उनी खेल्छन् कियोटाका जे भए पनि। उसले उसलाई आफ्नै फाइदाको लागि प्रयोग गर्छ, उसले जे भए पनि अनुमति दिनुपर्छ।
हामीसँग अन्तिम पटक छ किक्यो कुशिदा जसले धेरै न्यानो, शान्त र मायालु व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्दछ। उनी आफ्ना सँगी सहपाठीहरूको बीचमा राम्रो देखिन्थ्यो र समग्रमा राम्रो कोमल प्रकृति देखिन्छ। पहिलो एपिसोडमा पनि, उनी भन्छिन् कि उनीको मुख्य लक्ष्य भनेको स्कूलको प्रत्येक व्यक्तिसँग साथी बन्नु हो।
यद्यपि3वा चौथो एपिसोडमा, यो देखाइएको छ कि उनको पूर्णतया फरक पक्ष छ, र उनले धेरैजसो समय प्रदर्शन गर्ने व्यक्तित्व पूर्ण रूपमा नक्कली छ। यो डरलाग्दो छ र फेरि सोसियोपैथिक लक्षणहरू प्रदर्शन गर्दछ तर उनको रहस्य पत्ता लगाउने एक मात्र हो कियोटाका। त्यसपछि उनले आफ्नो गोप्य खुलासा गरेमा उनले आफूलाई बलात्कार गरेको दाबी गर्ने भन्दै धम्की दिन्छिन्। यसले उनको वास्तविक व्यक्तित्व देखाउँछ। तैपनि, उनी बाहेक सबैलाई मूर्ख बनाउँछिन् होरिकिता जसले बेवास्ता गर्छ र सामान्यतया सामान्यमा उनीबाट टाढा रहन्छ।
मलाई शृङ्खलाका धेरैजसो क्यारेक्टरहरूसँग कुनै समस्या थिएन, तर केहीलाई मैले तिनीहरूको शीर्ष संवादको लागि असहनीय पाएँ, विशेष गरी मनाबु, उसले सोचेको जस्तो थियो Horatio Kane बाट CSI मियामी। जे होस्, त्यहाँ केही राम्रा रोचक पात्रहरू थिए जुन मलाई धेरै मन पर्यो जस्तै चाबशीरा र र्युउएन.
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यस शृङ्खलामा धेरै क्यारेक्टरहरू थिए त्यसैले तिनीहरूलाई ट्र्याक राख्न र ती सबैका लागि लेख्न गाह्रो थियो। जे होस्, मैले केहि पात्रहरूमा धेरै चासो पाएको छु र मलाई ती मध्ये धेरै संवादको सन्दर्भमा लेखिएको तरिका मनपर्यो, यद्यपि मलाई कहिलेकाहीँ यो मेरो मनपर्नेको लागि धेरै माथि छ जस्तो लाग्यो।
केहि पूर्णतया बिर्सने योग्य थिए, जबकि केहि म मेरो टाउकोबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्दिन। यद्यपि म पक्का छु कि तिनीहरू शृङ्खलाको प्रगति कहिले र कहिले विस्तार हुनेछन् अभिजात वर्गको कक्षा सिजन २ आउँदैछ।
अन्त्य प्लट - एलिट सिजन २ को कक्षा कोठा
"एलिटको कक्षा कोठा" बाट लिइएको (एपिसोड))
अन्तिम कथानक र सामान्य अन्त्य अभिजात वर्गको कक्षा धेरै अचम्मको छ, यद्यपि म जे भए पनि त्यस्तै केहि आशा गरिरहेको थिएँ। अचम्म लाग्दैन, कियोटाका बिन्दुहरूमा शर्त लगाएर र Horikita को ज्ञान बिना कक्षा नेता परिवर्तन गरेर आफ्नो कक्षामा सबैलाई बचाउँछ। एपिसोड 12 मा हामी कियोटाकाका धूर्त विशेषताहरू साथै उसको मनोवैज्ञानिक र/वा सामाजिक रोगहरू पनि देख्छौं। उहाँले अन्तमा आफ्नो वास्तविक मनसाय बताउनुभएको सानो संवाद मलाई धेरै मन पर्यो। यो पहिलो सिजनको शानदार अन्त्य हो, र यदि तपाइँ त्यसपछि के भयो जान्न चाहनुहुन्न भने हामी छक्क पर्नेछौं।
यो सम्पूर्ण अन्त्य हामीलाई अचम्मित पार्न डिजाइन गरिएको थियो, हामी सबै जान्न चाहन्थ्यौं कि अब के हुन्छ। अन्त्यमा क्लास डीले लगभग 275 अंक प्राप्त गरेको देख्छ र टापु प्रयोगमा शीर्षमा आउँछ। यो सबै धन्यवाद हो कियोटाका र शायदै होरिकिता. कियोटाका धेरै धूर्त छ र उसको प्रभावकारी कार्यहरूका लागि सबै ध्यान खिचिएको छ र अन्य व्यक्तिहरूमा लगाइन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। होरिकिता र कुशीसा। यो एक धेरै चलाख र प्रभावकारी रणनीति हो जुन उसले सधैं पछ्याएको देखिन्छ।
यसका लागि उनको साँचो इरादा अज्ञात छ, तर उच्च-अपहरूले ध्यान दिन्छन् कियोटाका कक्षा डी अगाडि बढ्नुको साँचो कारण हो। चाबशीरा यसलाई पनि रिले गर्छ होरिकिता, उहाँ सम्पूर्ण कक्षाको अधिक कुशल र प्रभावकारी विद्यार्थी हुनुहुन्छ भनी बताउनुहुन्छ, मैले कल्पना गरेको उनको मन नपर्ने धेरै।
यसअघिका एपिसोडहरूमा, होरिकिता पत्ता लगाउने प्रयास गर्छ कियोटाका मनसाय तर उसले यसो भन्दै आपत्ति जनायो, "मैले भनेझैं म तिमीलाई कक्षा ए मा पुग्न मद्दत गर्छु, तर मेरो जीवनमा नखोज्नुहोस्"। उसले यो भन्न किन रोज्छ थाहा छैन, तर यदि मैले अनुमान लगाउने हो भने म भन्न चाहन्छु कि यो धेरै राम्रो कारणको लागि हो। उसले आफ्ना सबै उद्देश्यहरू अज्ञात राख्न चाहन्छ, र ध्यान नदिई सबैसँग मिसिन चाहन्छ। कियोटाका केवल चासो शीर्षमा चढेको देखिन्छ, कक्षा A मा पुग्न।
कियोटाका ट्रु मोटिभ्स - एलिट सिजन २ को कक्षाकोठा
यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले अन्तिम दृश्यलाई ध्यानमा राख्छौं र उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो ठूलो महत्त्वको छ, र यसले मैले उहाँको बारेमा पहिले नै निकालेको निष्कर्षलाई बलियो बनायो। यो निष्कर्ष हो कियोटाका एक मनोरोगी र/वा एक समाजशास्त्री हो। सबैभन्दा पहिले उसलाई हेर, उसको आँखा मरेको छ, उसले कहिल्यै खुशी वा दुःख जस्ता भावनाहरू व्यक्त गर्दैन, ऊ कहिल्यै हाँसेर हाँस्दैन आदि।
यद्यपि, यो मात्र होइन, अनुसन्धानकर्ताहरू विश्वास गर्छन् कि मनोरोगीहरू बाल्यकाल र किशोर जीवन जस्ता विषयहरू पालनपोषणको क्रममा वातावरणीय कारकहरूको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्। मनोवैज्ञानिकहरू कहिलेकाहीं अन्य मानिसहरूद्वारा विश्वसनीय र आकर्षक रूपमा देख्न सकिन्छ।
यी भावनात्मक लक्षणहरू के हुन् कियोटाका कहिलेकाहीँ प्रदर्शित हुन्छ र यसले मेरो निष्कर्षमा बढि अंक दिन्छ। साथै, हामी यी साना फ्ल्यासब्याकहरू देखिरहन्छौं कियोटाका विगत। उनी बाल्यकालमा कुनै न कुनै प्रकारको प्रयोगमा रहेको हुनसक्छ र यो पहिलो सिजनमा आउने निरन्तर कुरा हो।
यदि तपाईंले मलाई सोध्नुभयो भने यो उहाँको वास्तविक मनसाय र समग्र चरित्रको स्पष्ट संकेत हो। मलाई लाग्दैन कि धेरै मानिसहरूले उहाँको चरित्रलाई मैले जस्तै देख्छन्, धेरै मानिसहरूले उहाँलाई "खराब-गधा" भनेर वर्णन गर्छन् किनभने उहाँका कार्यहरूका कारण, वास्तवमा उहाँको वास्तविक मनसायको बारेमा कहिल्यै सोच्दैनन्। यो विकास हामीले एपिसोड 12 मा देख्छौं कियोटाका एक तरिका थप रोचक चरित्र, र यसले उहाँमा मेरो सिद्धान्त थप्छ। यदि तपाईं मेरो सिद्धान्तमा विश्वस्त हुनुहुन्न भने, अन्तिम एपिसोडको अन्त्यमा उहाँले के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्:
क्लासरूम अफ द एलिटको सिजन २ को लागि आशा धेरै उच्च छ र यो धेरै कारणहरूको लागि हो। सबै भन्दा पहिले यो श्रृंखला बिक्री र समग्र उल्लेखनीयता को मामला मा धेरै सफल थियो। धेरै मानिसहरूले यस एनिमे बारे सुनेका छन् र यो प्रशंसक र आलोचकहरू बीच मनपर्छ। एनिमको लागि इजाजतपत्र धेरै फरक स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूमा बेचिएको छ, यसलाई धेरै लोकप्रिय र धेरै विभिन्न प्रकारका एनिम दर्शकहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउँदै।
के त्यहाँ एलिट सिजन २ को कक्षा कोठा हुनेछ?
"एलिटको कक्षा" बाट लिइएको (एपिसोड ११)
तपाईं मध्ये धेरैलाई थाहा होला, एनिमे मूल सृष्टिकर्ताद्वारा लिखित मंगाबाट अनुकूलित गरिएको छ र त्यसपछि तिनीहरूलाई इजाजतपत्र दिइएको छ। पहिलो सिजनले3खण्डहरू मध्ये 15 वटा मात्र कभर गर्यो जुन बारे लेखिएको छ अभिजात वर्गको कक्षा। त्यहाँ मंगाको धेरै मात्रा हुन सक्छ, तर 15 हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ निश्चित रूपमा कति छन्, त्यहाँ धेरै हुन सक्छ।
एलिट सिजन २ को क्लासरूम सम्भव छ वा छैन भनेर जान्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसको अर्थ सीजन २ हो। अभिजात वर्गको कक्षा बनाउन सजिलो हुनेछ। यो एलिट सिजन2को कक्षा कोठा अनुकूलन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त उत्पादन कम्पनी भएको कारण, थप सामग्री लेख्न पर्खनु पर्दैन। तिनीहरूसँग काम गर्नको लागि 12 थप खण्डहरू छन्, हामीले भनेझैं, 15 हामीलाई थाहा भएजति छ, त्यहाँ धेरै हुन सक्छ।
मेरो विचारमा कथालाई डोरीमा छोडिएको थियो र हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुनेछ कि अर्को स्टुडियोले यसको उत्पादन जारी राख्दैन। अभिजात वर्गको कक्षा हालको स्टुडियोले कुनै कारणले उत्पादन बन्द गरेको भए पनि। सामग्री त्यहाँ छ, त्यसैले यो एकदम सम्भव छ कि नयाँ सिजन बनाइनेछ। त्यहाँ नहुनुको लागि पर्याप्त कारण छैन।
उत्पादन कम्पनीको साथमा जाने लोकप्रियता र सामग्रीलाई ध्यानमा राख्दै, हामीलाई दोस्रो सिजन यसको बाटोमा छैन भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुनेछ। केही व्यक्तिहरूले यस तथ्यलाई औंल्याए कि अन्तिम एपिसोड3मा रिलीज भएको 2017 वर्ष भयो, तर यो कुनै संकेत होइन कि उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ। केहि एनिमेहरू धेरै लामो अन्तरालमा गएका छन् जस्तै पूरा धातु दबाइ, त्यसैले यो पूर्ण रूपमा सम्भव छ, केवल आफ्नो आशा राख्नुहोस्।
एलिट एयरको कक्षा कोठाको सिजन २ कहिले हुनेछ?
क्लासरूम अफ द एलिटको नयाँ सिजन २ को लागि उच्च आशाहरू छन्, र परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ सिजन कहिले रिलिज हुनेछ भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौं। हामीले यस ब्लगमा समीक्षा गरेका सबै कुराको आधारमा हामीले गणना गरिएको अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसको लोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्दै, यो पछिल्लो सिजनदेखि भएको समय र उत्पादन कम्पनीहरूको इतिहास, हामी यस वर्ष कहिलेकाहीँ भन्नेछौं (2021) वा अर्को वर्ष। त्यहाँ कुनै पनि इजाजतपत्र समस्याहरू हुनु हुँदैन र निश्चित रूपमा कुनै पनि सामग्री मुद्दाहरू हुनु हुँदैन हामी यस वर्ष नयाँ सिजनको लागि आशा गर्छौं, तर 2022 सुरक्षित र अधिक यथार्थवादी देखिन्छ, हामी सबैको आशा जगाउन चाहँदैनौं।
हामी केवल हामीले जम्मा गरेका प्रमाणको आधारमा अनुमान लगाइरहेका छौं। हामी अवश्य पनि गलत हुन सक्दछौं, र हामी आफैंलाई कसैले जाँच्न वा मूर्ख गर्न चाहँदैनौं। हामी आशा गर्दछौं कि यो ब्लगले तपाईंलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र जानकारीमूलक राय प्रदान गर्न प्रभावकारी भएको छ जस्तो कि यो गर्नु पर्ने थियो।
यो एनिमको लागि समग्र रेटिंग
यदि तपाईं हाम्रा ब्लगहरू पढ्न मनपराउँनुहुन्छ भने कृपया अगाडि बढ्नुहोस् र यो ब्लग मनपराउँनुहोस् र साझेदारी गर्नुहोस्, यसले वास्तवमै हामीलाई मद्दत गर्दछ। पढ्नका लागि धन्यबाद, हामी तपाईलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छौं।
अप टु डेट रहनको लागि हाम्रो इमेल प्रेषणको सदस्यता लिनुहोस्
टैग: एनिमे क्लासरूम ओफिलाइट कुलीन कक्षाको कक्षा २ Classroomoftheliteseason2releasedate
July जुलाई २०२० 7::2020 अपराह्न
मलाई आशा छ त्यहाँ दोस्रो सत्र छ।
Pingback: के एनिम भांग सँगै जान्छ? - इमानदार राय - पालना दृश्य
अघिल्लो प्रविष्टि २०२२ मा हेर्नका लागि उत्कृष्ट एनिमे
अर्को प्रविष्टि 10 मा हेर्नको लागि अर्को शीर्ष 2022 स्पेनिश डब एनिम शोहरू